250.000 4 ny singa Xiaomi Redmi Note 10s amidy any India ao anatin'ny XNUMX minitra | Androidsis
Xiaomi dia mivarotra 250.000 Redmi Note 4 ao anatin'ny 10 minitra amin'ny varotra varotra voalohany any India
Omaly dia fantatsika fa Hugo Barra nandao ny toerany tao Xiaomi hiverina any amin'ny fireneny taorian'ny telo taona nametrahana an'ity orinasa izay vitany ity miovà amin'izay fanombohana amin'ny zavatra lehibe kokoa. Xiaomi izay nampiasa ny traikefan'ilay exGoogler hipetraka seza any amin'ireo firenena manamorona an'i Chine, toa an'i India.
Miaraka amin'ny zavatra niainan'i Xiaomi tamin'ny varotra tselatra dia afaka nivarotra tamin'ny hafa izy 10 minitra ireo singa 250.000 an'ny Redmi Note 4 amin'ny fivarotana voalohany toy izany any India. Navoaka tamin'ny alàlan'ny Flipkart sy ny mi.com ny fitaovana omaly, ary tsy ho hita raha tsy amin'ny herinandro ambony.
Ny Redmi Note 4 dia manana ny zava-drehetra hanarahana ny halavan'ny fahombiazan'ny teo alohany, ny Redmi Note 3, ny telefaona novidiana indrindra an-tserasera eto amin'ity firenena ity misy fivarotana maherin'ny 2,3 tapitrisa tao anatin'ny enim-bolana teo ho eo tamin'ny taon-dasa.
Ny Xiaomi Redmi Note 4 dia manomboka ao amin'ny 147 $ ho an'ny kinova RAM 2GB + 32 GB ny memo anatiny, raha ho an'ny 4GB RAM sy 3 GB fitehirizana anatiny dia 32 dolara izahay. Ny variant ambony indrindra amin'ny Redmi Note 162 dia mitentina $ 4 miaraka amin'ny RAM 190GB sy fahatsiarovan-tena 4GB.
A terminal misy 5,5 efijery IPS Full HD efijery, MediaTek Helio X20 octa-core 1,85 GHz puce, fakan-tsary 13MP aoriana, 5 MP aloha ary Android 6.0.1 Marshamallow izay manolotra ihany koa ny mety hanitarana ny fahatsiarovana ao anaty amin'ny microSD. 4.000 mAh ny bateria ary misy famahanana haingana, Bluetooth 4.2, USB OTG ary sensor ho an'ny dian-tanan-tselatra haingana.
Xiaomi Redmi Note 4 izay manana fahombiazana lehibe any India araka ny fanamafisan'io fivarotana an-tsokosoko izay singa 250.000 nanjavona io tao anatin'ny 10 minitra monja.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Xiaomi » Xiaomi dia mivarotra 250.000 Redmi Note 4 ao anatin'ny 10 minitra amin'ny varotra varotra voalohany any India
Samsung dia manangona chip Snapdragon 835 manery ny fifaninanana hampiasa processeur taloha